Fahad Yaasiin oo Khatar Siyaasadeed ku ah Farmaajo (Xog sir ah) | SAHAN ONLINE
Fahad Yaasiin oo Khatar Siyaasadeed ku ah Farmaajo (Xog sir ah)
MUQDISHO- Warsidaha Garowe Online ayaa soo koobey warbixin lagaga hadlayey qayb kamid ah taariikh nololeedka agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taasoo lagu xusey shaqooyinkii uu soo qabtey, urur diimeedyada qaybta uu ka noqdey, siyaasada Soomaaliya sida uu ku soo galey, dadka uu shaqaaleysiiyey kuwasoo u balan qaadey xilal magac iyo wadamada xiriirka dhaqaale iyo siyaasadeed uu la leeyahay.
Xogtan (Intelegence Breifing) oo sida warsidaha GO fahansan yahay sirdoonka wadamada danaha siyaasdeed ka leh Soomaaliya is-dhaafsadeen ayaa lagu sheegey in agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya sarkaal sare kasoo noqdey urur diimeedkii la oran jirey Al-Itixaad Islaami, isagoo dagaalo ka galey Araare, Gedo iyo Boosaaso sanadkii 1990.
Warbixintan ayaa lagu sheegey in dabayaaqadii sanadkii 1990 ururka Itixaad dib u eegis ku sameeyeen mowqifkooda ku aadanaa in xukunka Soomaaliya ku raadiyaan Qoriga caaradiisa iyagoo qaatey go’aanka ah iney bulshada baraan Diinta (Dacwo), waxaana arintaasi laga dhaadhiciyay inta badan dadkii kamid ahaa, marka laga reebo shaqsiyaad muhiim ah oo ay kamid yihiin; Shiikh Xasan Turki, Shiikh Xasan Daahir Aweys, Shiikh Cabdulahi Cali Xaashi iyo qayb kamid ah jaanibkii/Garabkii dhalinyarada kuwasoo goostey in dagaalka lagu jiro tan iyo inta dalka laga hirgalinayo nidaam ku dhisan shareecada Islaamka.
Shaqooyinka Fahad Yaasiin qabtey;
Fahad Yaasiin ayaa waxbarsho dhinaca saxaafada u tagey wadamo ay kamid tahay Yamen isagoo muddo ka shaqeynayey website lagu sheegey in ururka Itixaad iska-lahaa kasoo la oran jirey Somalitalk kadibna waxaa uu ku biirey Talefishinka Al-Jazeera qaybtiisa Carabiga waxaana uu madax ka noqdey xafiiska ay ku leedahay magaalada Muqdisho kadib markii uu muujiyey ku dhowaanshihiisa Al-Shabaab. Dhinaca kale waxaa uu noqdey qofka lagala soo xiriiro marka dowlada Qadar rabto iney lacag siiso ururka Al-Shabaab madaxdiisa isagoo xiriir dhow la sameystey hogaamiyihii ururkaas Axmad Godane, Ibraahim Jaamac Afghan; Xasan Daahir Aweys, Shiikh Mukhtar Roobow, Macalin Burhan.
Dhinaca kale xogtaan la is-dhaafsadey ( Intlegence breifing) ayaa sheegtey in agaasimaha guud ee Madaxtooyada Soomaaliya tababar dheraad ah oo dhinaca sirdoonka ah dalka Qadar ka qaatey. Sanadkii 2012 ayuu iska casiley shaqadii wariyaha Al-jazeera isagoo ku biirey xarun loogu magac darey Daraasada Istraatijiyda ee Talefishinkaas.
Tan iyo intii uu ku biirey xaruntaas ma uusan soo saarin warbixino ama qoraaladii looga bartey taasoo cadeyn u aheyd in howsha loo dhiibey aysan aheyn cilmi baaris balse aheyd shaqo sirdoon oo qarsoon sida warbxintaan ku xusan. Waxaana loo xilsaarey inuu xog ka ururiyo siyaasiyiinta Soomaaliya iyo xaalada siyaasdeed ee dalkaan dagaalada sokeeye ku jirey muddo ku dhow 30 sano, waxaana mas’uul looga dhigey ah inuu calaamadeeyo islamarkaana iibiyo qofka noqon kara Madaxweynaha Soomaaliya.
Warbiixntaan ayaa sheegtey in Fahad Yaasiin sanadkii 2001 uu taageerey madaxtinimadii Jaamac Cali jaamac ka raadinayey Puntland isagoo markaas colaad u hayey AHN Cabdulahi Yusuf oo dabayaqadii 1990 dagaal la galey ururka Al-Itaxad.
Sanadkii 2012 Fahad Yaasiin waxaa uu taageerey tartankii Xasan Shiikh ugu jirey Madaxtinimada Soomaaliya balse way iska horyimaadeen kadib markii uu hirgalin kari waayey siyaasadiisa qarsooneyd ee ku aadneyd sida loo maamulayo dalka Soomaaliya.
Xiriirka Fahad Yaasiin iyo Farmaajo
Fahad Yaasiin oo shaqadiisu aheyd in uu tilmaamo qofka tagaya xarunta Vlla Soomaaliya ayaa xiriir dhow la yeeshey sida warbixntaan sheegeyso markii Farmaajo laga qaadey 2011 xafiiska Ra’isal wasaaraha Soomaaliya kadib heshiiskii Kampala Accord.
Madaxweyne Farmaajo oo sumcad badan ku heley xil ka qaadistii lagu sameeyey, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ayaa Fahad Yaasiin waxaa uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay siyaasigaas.
Qoraalkaan ayaa lagu sheegey in Fahad Yaasiin labo jeer isku dayey in Madaxweyne Xasan Shiikh uu ka raadrido in Ra’isal wasaare uu u magacaabo Farmaajo balse ka diidey taasoo sii xoojisay inuu dagaal siyaasdeed ku qaado saaxabidiis Damul-jadiid.
Wayadaas Fahad Yaasiin waxaa uu la kulmey Xasan Khayre oo markaas u shaqeeynayey hay’ada NRC. Norway iyo Qadar ayaa ka shaqeenayey markaas in wadahadal laga dhexsameeyo Al-Shabaab iyo dowlada Soomaaliya howshaas waxaa qayb weyn ka qaatey Fahad Yaasiin iyo Xasan khayre. Tani waa sababta keentey in hay’ada QM ( UN Monitoring Group) warbixin kasoo saarto ay ku eedeeyneyso Xasan Cali Khayre inuu xiriir la sameeyey kooxdaan.
Fahad Yaasiin isagoo weli u shaqeynaya xarunta Cilmi baarista Al-Jazeera ayaa waxaa uu dhisay kooxihii ka qayb qaadan lahaa ololaha madaxtinimo ee doorashada Farmaajo waxaana qayb kamid ah ahaayeen saaxibadiis ay ka wada tirsanaayeen urirka Al-Itixaad sida; Cabdishakur Cali Mire oo hadda ah ( Xildhibaan ), Balal Maxamad Cusmaan ( Caawiyaha gaarka ah ee Madaxweyen Farmaajo), Jaamac Caydiid oo laga dhigey (Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga) iyo Cabdirizaq Shoole oo waqtigaan ah ( Ku- xigeenka agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya).
Waxaa kale ee uu agaasime Fahad sameeyey xiriir inuu la yeesho shaqsiyaad aad ugu dhow ololaha doorasho ee Madaxweyne Xasan Shiikh kuwasoo uu u balan qaadey in xilal uu kasiin doono dowlada cusub ee dhalan doonta, waxaana kamid ahaa dadkaas; Xasan Cali khayre oo noqdey Ra’isal wasaaraha Soomaaliya, Thaabat Cabdi Maxamad oo loo magacaabey guddoomiyaha gobolka Banaadir, Jamal Maxamad Xasan Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah iyo Cabdirashid Maxamad oo loo dhiibey Wasiirka Batroolka Soomaaliya.
Khatarta ku jirta in Fahad Yaasiin ku dhowaado Madaxweyne Farmaajo
Marka laga soo tago shaqada Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya uu ka hayo Fahad Yaasiin waxaa uu madax uu yahay koox kala soo shaqeysay ololaha doorashada ee Madaxweyne Farmaajo isagoo dhinaca maamula lacagta dowlada Qadar ku bixiso siyaasada Soomaaliya. Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale waxaa uu gacanta ku hayaa xildhibaano gaaraya 70 kuwasoo codkii ugu horeeyey siiyaye madaxweyne Farmaajo iyadoo gunno ahaan u siiyo 3000-4000 dollar midkii bil walba taasoo uu kaga hortagoayo in ay hoos u dhac ku yimaado taageeradiisa aqalka Wakiilada. Arintaan ayaa ka dhigtey in Fahad Yaasiin uu lahaado go’aanka ugu sareeya ee maamulka dowlada Soomaaliya isagoo dhinaca arimaha siyaasada ku isticmaala lacag aan laheyn xisaab celin dowladeed.
Qoraalkaan waxaa sidoo kale lagu sheegey in dhinaca fikirka Fahad Yaasiin uu kala mid yahay ururka Al-Shabaab maadaama uu siyaasad ahaan kasoo horjeeda nidaamka Federaalka, joogitaanka AMISOM ee Soamaaliya iyo wadamada reer Galbeedka, waxaa kale uu diidan yahay dhismaha ciidamo Qaran isagoo aaminsan ineysan caqiido laheyn, xiligaana waxaa uu ka shaqeynaya inuu dhiso Jabhad kooxeed madax uu kayahay Mukhtaar Roobow.
Agaasime Fahad ayaa sidoo kale qorsheynaya in hadii uu ku guuleysto magacaabista madaxa hay’adda sirdoonka Soomaaliya ama ku xigeenkeeda in uu dhiso koox sirdoon ah oo ka shaqeysa arimaha siyaasada iyadoo qorshayaasha dhismaha ciidamada ay lacagtooda bixineyso dowlada Qadar islamarkaana tababarka siinayaan saraakiil ka tirsan dalka Iran.
Macluumaadka warbxintaan xambaarsan tahay waxaa laga soo guuriyey xog sirdoonka wadamada daneeya arimaha Soomaaliya is-waydaarsadeen ee ma aha mid Garowe online baaris ku sameeyey.